राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान, कसले पाए ? « KBC khabar
राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान, कसले पाए ?
२५ पुष २०७८, आईतवार १९:००
काठमाडौं, २५ पुस । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ । आयोगले आइतबार विज्ञप्तीमार्फत अन्तिम नामावली प्रकाशनसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि चुनाव चिह्न प्रदान गरेको जानकारी गराएको छ ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का उम्मेदवारका लागि सूर्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई हलो, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मादल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई साइकल चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नौ वटा राजनीति दलका उम्मेदवारले भाग लिँदै हुनुहुन्छ ।